In ka badan 320 qof oo ku dhintay dhul gariir ka dhacay Ciraaq. – Idil News
In ka badan 320 qof oo ku dhintay dhul gariir ka dhacay Ciraaq.
Dhulgariir xoog badan oo cabirkiisu yahay 7.3 ayaa ku dhuftay xadka waqooyiga ku yaalla ee u dhexeeya Iiraan iyo Ciraaq, kaas oo dilay in kabadan 200 ruux.
Ugu yaraan 320 ruux ayaa ku dhintay gobolka Kermanshah ee galbeedka dalka Iiraan, sida ay masuuliyiin u sheegeen warbaahinta dawladda.
Burburkana waxaa laga soo sheegay illaa siddeed tuulo, sida uu sheegay madaxa bisha cas ee Iiraan Morteza Salim